အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ချင်းချောင်းနန်းတော်မှ လက်ရှ?? - Yangon Media Group
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ချင်းချောင်းနန်းတော်မှ လက်ရှ??
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) NUAC ၏ ငွေရတုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တက္ကသိုလ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ကုက္ကိုင်းရှိ ချင်းချောင်း နန်းတော်မှ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လက်ရှိတက္ကသိုလ်တည်နေရာသို့ စက်ဘီးစီးနင်းပြီး ငွေရတုအလံတိုင်ကို သယ်ဆောင်စိုက်ထူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်တွင် တက္က သိုလ်မှ ဆရာတစ်ဦးအပါအဝင် ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ လက်ရှိ တက်ရောက်နေသော ကျောင်း သားများ စုစုပေါင်းစက်ဘီး ၇ဝ စီးကျော်ပါဝင်မည်ဟု ဆိုသည်။
”ငွေရတုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ် စတင်ခဲ့တဲ့ ကုက္ကိုင်းက ချင်းချောင်း နန်းတော်ကနေ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် မှာရှိတဲ့ ယခင်ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် အခုအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်ကို စက်ဘီးများ စီးနင်းပြီး ငွေရတုအလံတိုင်ကို သယ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးမယ့်သူကတော့ ဆရာ တစ်ဦး၊ ကျောင်းသားဟောင်းနဲ့ လက်ရှိ တက်ရောက်နေတဲ့သူတွေ ၇ဝ လောက်ပါ စီးနင်းလိုက်ပါကြ မယ်။ ငွေရတုအလံတိုင်ကို ပထမ တော့ စက်ဘီးနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်မလို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အခက် အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ငွေရတုအလံတိုင်ကို ရှေ့ဆုံးက ကားနဲ့သယ်ဆောင်ပြီး နောက်က နေ စက်ဘီး ၇ဝ ကျော်ကလိုက်ပါ ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု စီစဉ်သူ ကျောင်းသားဟောင်း ကိုဟန်ညီဖြိုးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ပြောသည်။ ယင်းငွေရတုအလံတိုင် သယ် ဆောင်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ဖွင့် ပွဲအခမ်းအနားမတိုင်မီ ဆောင်ရွက် ကြမည်ဖြစ်ပြီး အလံတိုင်ရောက်ပြီး နောက်မှ ဖွင့်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
”ချင်းချောင်းနန်းတော်မှာ စုရပ်ထားပြီး စုချိန် နံနက် ၇ နာရီ ခွဲနဲ့ စထွက်ချိန် ၈ နာရီသတ်မှတ် ထားပါတယ်။ NUAC မှာတော့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားက သရဖီဆောင်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး သရဖီဆောင်သို့ ငွေရတု အလံတိုင်သယ်ဆောင်ပြီး စိုက်ထူဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ လမ်းကြောင်းများအနေဖြင့် ချင်းချောင်းမှ ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းအတိုင်းတည့်တည့်ဆင်းပြီး သစ္စာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာဘုရား၊ ပင်လုံဘက်မှ တောင်မြောက်လမ်း ဆုံ၊ ယင်းမှတစ်ဆင့်တက္ကသိုလ်၏အရှေ့ပေါက်(အောင်ဇေယျအိမ် ရာ)ဘက်မှ သရဖီဆောင်အထိ ဝင် ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး စက်ဘီးစီးနင်း သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် လူနာ တင်ယာဉ်တစ်စီးကိုလည်း စီစဉ် ထားကြောင်းသိရသည်။။
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လက်ရှိအစိုးရ လက်ကျန်သက်တမ်းအတွင်း မဖြစ်နိုင်သေးဟု ပြည်သူ့ပါတီ ဆို
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မှောင်ခိုကုန်သွယ်သော သင်္ဘောများနှင့် ကုမ္ပဏီများကို ကုလသမဂ္ဂက အမည်ပျက်